Muqdisho:-Ciidamada DFKM ayaa maanta mar kale waxay hawlgallo ka bilaabeen magaalada Muqdisho iyaga oo xiray waddada isku xirta Igoysyada Soope iyo Isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaana ay burburin ku bilaabeen sandaqo iyo goobo ganacsi oo laga dhisay wadada
Ciidamada DFKM oo ay weheliyaan kuwa AMISOM ayaa sidoo kale baaritaano ka sameeyey dhismayaasha ku dhow Isgoyska Soope iyaga oo baarayey sidoo kale gawaarida Bl-ka ah iyo kuwa raaxada oo ay sida gaarka u leeyihiin shacabka.
Waxaa hakad galay isku socodka gawaarida u kala gooshi jirtay KM4 iyo Ex-Control Afgooye waxaana anitaas cabasho ka muujiyey dadweyne badan oo lahaa goobo gancsi oo ay ciidamada Burburiyeen waxaana rasaas is weydaarsaday ganacsatadii iyo ciidamada DFKM.
Dadweyne Careysan ayaa sidoo kale dab qabadsiiyey shaagagga waxayna diideen in ciidamada ay fuqiyaan goobo ganacsi oo ku yaalay isgoyska Zope iyo meelo ku dhow isgoyska Banaadir .
Saraakiisha ciidanka DFKM ayaa sheegaya in howlgaladaan ay qayb ka yihiin dadaalka ay dowladu ugu jirto sugida amaanka magaalada Muqdisho iyo ka hortaga weerarada lagu qaado ciidamada DFKM iyo kuwa AMISOM.
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka nastay dagaaladii Cuslaa ee dhexmari jiray ururka Al-Shabaab iyo kuwa DFKM oo ay kaabayaan kuwa AMISOM balse waxaa jira dilal ka dhaca magaalada Muqdisho.